(98 okushiwo abanye)
Aviemore, Scotland, i-United Kingdom
Leli gumbi elilodwa lokulala elingaphansi kweNook linendawo yokuhlala elula / yokudlela kanye nekhishi elinezinto eziningi ezigcwele elinendawo yokugezela ethandekayo yesimanje kanye negumbi lokulala elihlukaniswe kahle elakhelwe kuma-wardrobes. I-Nook inedrayivu eyabiwayo enendawo yokupaka yangasese esendaweni ethule kakhulu eqhelelene nehlathi lapho izinketho zokuhamba ziziningi khona.
I-Nook ethokomele endaweni ethule emaphakathi ye-Aviemore ngaphesheya nje kwendlela ye-Orbital nendawo enhle enamahlathi. Ukuhamba okumangalisayo ukuya emaphandleni azungezile ngokoqobo ngaphandle komnyango. Indawo enhle yokuqala ukuhlola ngaphandle okuhle kodwa ngaphakathi kwebanga lokuhamba elilula lazo zonke izinsiza ze-Aviemore.
Siyazamukela izinja eziziphethe kahle ku-snug ngohlelo lwangaphambili (imali yokuhlanza ingasebenza).
I-TV isethelwe ukusetshenziswa kwe-DVD kuphela (ukukhethwa kwama-DVD ayatholakala) futhi ayikho i-wifi. Sithemba ukuthi izivakashi zethu zizokujabulela ukuvala ukuphila kwansuku zonke okumatasa njengoba senza!
4.86(98 okushiwo abanye)
4.86 · 98 okushiwo abanye
Ibekwe ngaphakathi kweNational Park futhi endaweni emaphakathi ye-Aviemore the Nook isendaweni efanele ukuhlola izindawo ezinhle ezizungeze i-Aviemore. Phakathi nebanga elilula lokuhamba lesikhungo kukhona amakhefi amahle, izindawo zokudlela nezitolo ongazama ngazo.
Kukhona indawo yokupaka ngaphandle komgwaqo endleleni yedrayivu eyabiwayo nendlu engumakhelwane. I-Nook inenqubomgomo yokuzihlola uma ufika kodwa sihlala eduze kakhulu ukuze sibe khona uma udinga noma yini. Isisefo esingukhiye sivumela izivakashi ukuthi zifike futhi zingene/zishiye indawo yokuhlala ngesikhathi eziphumulele.
Kukhona indawo yokupaka ngaphandle komgwaqo endleleni yedrayivu eyabiwayo nendlu engumakhelwane. I-Nook inenqubomgomo yokuzihlola uma ufika kodwa sihlala eduze kakhulu ukuze sibe k…
Hlola ezinye izinketho ezise- Aviemore namaphethelo